Inyanga emfushane kunazo zonke ngonyaka, Februwari - ke liyinqolobane amaholide ezihlukahlukene, kokubili Orthodox futhi kazwelonke noma ayibonwa emibuthanweni emincane. Yini esingayenza ngayo, mhlawumbe, emqondweni elinjalo e yethu ndoda - amasiko ahlonishwe futhi bebodwa, umakhelwane, futhi nje labo azithande. Ake sibone ukuthi yini ngamaholide Kufanele wazi futhi khumbula ngo-February okubandayo kugcine kubanda.
Imikhosi edume kakhulu ngo-February
Uma nicela noma yini isakhamuzi isilinganiso Februwari amaholide, khumbula ngowokuqala Day Valentine sika, futhi-ke, uSuku wobaba elimelela abaswelayo.
Ukuthinta kanye iholide okuthandayo kakhulu abathandi nje kwamandla amacembe ezintekenteke rose, amakhadi inemibala egqamile futhi eziningi angiqabule, yebo, nezimemezelo lothando - Day Valentine sika. Kuwo wonke amagumbi planethi yayo uphawu kokubili abadala kanye abathandi abasha kakhulu abazimisele ukwenza kanjalo okungenani omunye abandayo izinsuku ebusika egcwele imfudumalo ukumomotheka.
Akufanele sibakhohlwe Suku of Umdlali wasemuva we lawobaba, okuyinto ogujwa wonke amadoda asafa, wakhonza kwezempi ngaphambili, noma uhlela zijoyine abavikeli isimo.
Februwari 23 - lena usuku olukhethekile abantu Russian. Ezingeni lombuso, yenza ngempelasonto. Yingakho, uma bowuhlose uhlale e-February amaholide, sizokwazi ukuya endaweni ethile ngaphandle komuzi kulezi zinsuku.
Ebusika, sithanda ukugubha professional
Ngempela, Februwari umane dazzles amaholide ahlukahlukene. Kwezinye imithombo ungathola ulwazi oluningi mayelana ngamaholide ngoba nsuku zonke. Iningi lazo - professional, njenge:
- Februwari 6 - Usuku uweta wotshwala enkantini;
- 8 Februwari - usuku, lapho kubhekwa iholidi lobuchwepheshe abahloli;
- Februwari 10 - izisebenzi zamanxusa ngeqholo ukumemezela ukuthi usuku lwabo;
- Februwari 14 - ososayensi computer kungaba ngalolu suku, hhayi kuphela ukunikeza valentine, kodwa futhi ukuhalalisela nomunye ku Suku uhlelo ;
- Februwari 21 - abaholela ziqoqwa esiyingini bakhe abaseduze ukugubha iholide babo bomsebenzi.
UKwenza iZinto ngeNdlela eNgakajayeleki Februwari amaholide
Kuyaphawuleka ukuthi ungathola eningi izinsuku ezithakazelisayo, okuyinto abaningi abazi ekhalendeni Februwari. Nokho labo abanesithakazelo, ukunikeza uhlu kubo:
- Uyathanda ukuba ukugula ngo-February? Khona-ke unelungelo ukugubha uSuku Abagulayo 11,02, okuyinto waqaphela ngezinga lembulunga yonke.
- Usuku China ngimiswe ngokomthetho phezu 19 Februwari. Lokhu kwenziwa anginikhethanga ngengozi, ukuthi umthetho kwavunyelwana ngalolu suku, okuyinto uvala Whaling.
- Ukugcwalisa uhlu olunjalo, kuyafaneleka kokukhuluma Day International we polar bear. Lokhu kubaluleke kakhulu - ekubonile ukubaluleka khona zohlobo ngalunye oluphilayo zakwazi, futhi Bruins polar wabelwa kwalolu suku - 2 7 Februwari.
AmaRashiya amaningi nje ukuchitha (noma namanje dream ngakho) Februwari amaholide e China.
Uma uhlela ukuba uchithe impelasonto China, kungcono "Jerk 'kuso ngo-February, ngoba China usuku New Year azifani, njengoba senza, futhi ezimweni eziningi uwe ngo-February.
Lokhu kuyoba esimnandi kakhulu, elikhanyayo, namanzi, egcwele imizwelo onyakeni omusha empilweni yakho. amasiko ehlukene kakhulu, okuyiwona kumnandi ngakho ukubukela ngisho iqhaza, kuyokwenza mangaza nawe. Phatha ukuthi icala elifanayo ngokwakho ngo-February okuhle ukuba icala unyaka wonke futhi bejabule. I Februwari imikhosi e China - kuba njalo engavamile futhi eyingqayizivele. Ikakhulukazi umphefumulo Russian.
Kuphi ngoFebhuwari amaholide ngaphakathi isimo? imibono ezithakazelisayo
Awufuni ukuba size siye kwamanye amazwe? Uma ufuna ukuchitha ngamaholide Februwari eRussia, khona-ke nathi khawuleza ukujabulisa wena - kukhona izindawo zokuhlala eziningi Kunconywa ukuba uvakashele yangempela travel buffs.
Elula futhi ephephile kakhulu kukho - ubuthi enhloko-dolobha, futhi-ke, eSt Petersburg. Lezi amadolobha kubhalwe noma iyiphi inkathi, kunoma iyiphi inyanga mihle, futhi kukhona, yini ukubona.
Ngo-February amaholide eRussia ungase futhi uvakashele zokungcebeleka wendawo, ukuphulukisa, ibe ephelele entwasahlobo ka amandla kanye nemandla akhe kute banqobe noma iziphi izinkinga futhi ukuze uthole iholidi ehloniphekile emabhishi best in the world.
Akukubi ukuchitha ngamaholide ngo-February uvakashela nezihlobo edolobhaneni. Lots of amasiko ezithakazelisayo, okuyinto awuzwanga, uzobona ngamehlo akho. Nakuba abantu abaningi bathanda ukuvakashela leyo ndawo ehlobo, ebusika ngempela endaweni imilingo, ikakhulukazi uma ungakwazi khona, isibonelo, phakathi ekugubheni Carnival ngayo yonke nasemasikweni.
amaholide Orthodox kugujwa Februwari
Ayikho ebaluleke kancane futhi ethandwa nizokuvala Orthodox. Ukuze uhloniphe lezi amasiko wamukela emikhayeni eminingi, ngakho-ke kubalulekile ukwazi kahle lapho ehlasela zemikhosi Februwari-Orthodox ukumaka kubo, ukubonisa inhlonipho yabo inkolo nebandla. Abantu abaningi bacabanga ukuthi kwanele senqabe ukusebenza kule nkathi, kodwa lokhu ngokuphelele isimo esibi sengqondo. amaholide Orthodox babe nomuzwa ojulile esingcwele, ukuze baqonde ukuthi ungakwazi ngokujulile kuphela shí inkolo ngu ukuya esontweni.
Lezi ngamaholide ihlukaniswa njengoba edlulayo futhi isilungisiwe. Carnival zawo wonke umuntu ozithandayo libhekisela ukuhamba, ngoba usuku kwawo kuxhomeke kulokho usuku Easter.
Ngokwesibonelo, ngo-February 2015 namaholide enkolo-February, njengoba ahlangane iNkosi, futhi Mardi Gras uwela ngoFebhuwari 15 no-16 ngokulandelana. Uma unesithakazelo iholidi yenkolo ethile, kungcono ufune usuku lakhe ikhalenda esontweni kulo nyaka.
Yini Kuhle ukukhumbula ...
Abantu abaningi bacabanga ukuthi Februwari-Orthodox amaholide - lena izaba ezinhle uhlangane nabangani, uphawule inkampani. It ngempela. Kodwa okokuqala, uma ufuna ezigubha leli holidi Orthodox-February ngokuhambisana zonke canons, kuwufanele ngokuvakashela isonto futhi balalele iseluleko kwabefundisi phezu amasiko enkolo inhlonipho efanele.
Ukuzizwa umphefumulo ubumsulwa, okuyinto igcwele yimuphi umkhosi Orthodox, akufanele bayakhohlwa ngokuzila ukudla bashabalala kwezokuzijabulisa ukuze ahlanze umphefumulo wakhe, futhi umzimba.
Singabantu Abadali of the festival
Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, akusho ukuthi ulindele usuku oluqondile ukuchitha isikhathi kwesiyingi abathandekayo eduze kwakho kumnandi futhi ezithakazelisayo. Befuna impendulo yombuzo kufanele aye kuphi ngoFebhuwari amaholide, okokuqala ukuphendula wena - uma ufuna ngempela ukuba aye kwenye ebusika. Lesi iseluleko esihle noma ubani ihlela iholidi akufanele ukuba kuboshelwe ezinye izinsuku zemikhosi ethile ikhalenda, kungcono ukukwenza uma kukhona isifiso kanye nethuba. Nge ukuba nesimo sengqondo esinjalo nsuku zonke zokuphila kwakho kungaba yaphenduka iholide elikhanyayo.
Februwari kungaba real adventure ngenyanga, uma ube kulesi sikhathi khulula. Kulabo abathanda ukuvakashela zokungcebeleka kwezilwandle ufuna ukuvula kancane imfihlo: okuhamba phambili "phezu kolwandle" ukuyigibela ngo-February - iyona "off-inkathi 'futhi ngaleso sizathu, izindleko izinkambo etholakalayo kanye nokuntuleka izixuku zezivakashi olunikezile.
Into esemqoka - isikhathi ukuthola izintengo izinkambo, ukhethe ezifanele kakhulu ukuze ulondoloze ezisheshayo ngeke akukhohlwe mayelana into ebaluleke kakhulu.
Noma kunjalo, zama ukwenza njalo ngenyanga zokuphila kwakho ongenakulibaleka, hhayi kuphela Februwari. Konke ezandleni zakho!
Ifilimu ethi "Sweet November": abadlali nezindima
Yiziphi izenzakalo ongakulindela, uma ngabe umuntu is waphupha ngeSonto ngoMsombuluko?